Steven Pienaar Oo Si Rasmi Ah Dib Ugu Soo Laabtay Kooxdiisii Hore Ee Everton.
Everton ayaa dib u la soo wareegtay ciyaaryahanka reer South Afrika Steven Pienaar kaasoo 4.5 milyan ginni kaga soo tagay Tottenham islamarkaana heshiis afar sanno ah u saxiixay kooxdiisii hore ee Everton.
Pienaar, oo 30 jir ah ayaa afar sanno ku qaadan Goodinson Park ka hor inta uusan ku biirin Spurs bishii Janaayo 2011. Waxa uu ku soo laabtay 12 bilood ka dib isagoo amaah ah, haatana si joogta ah ayay u la wareegeen mar kale isagoo u xiran doonaa maaliyada No 22
Waxa uu u ciyaaray Everton 14 kulan xilli ciyaareedkii hore isagoo u dhaliyay afar gool.
“Halkaan ayaan ku faraxsanahay. Waxa ay ugu qaadatay isbuucyo yar inaan xaliyo arimaheyga, lakiin waan ku faraxsanahay inaan ku soo laabtay Everton” ayuu yiri Pienaar.
Taqaatiirtii Daweyneysey David Villa Oo Xaqiijisey In Uu Ka Soo Kabtay Jabkii Soo Gaaray December 2011
Weeraryahanka kooxda Barcelona David Villa ayaa la siiyey fasax ah in uu tababar qaadan karo kadib markii uu ka reystey jab ka soo gaaray lugta bishii December ee sanadkii hore.
Villa oo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan leh dalka Spain ayaa labo sano kahor waxa uu ku soo biirey Barcelona isagoo ka soo tegey naadiga Valencia mana ciyaarin tan iyo markii uu lugta ka jabay.
30-jirkan ayaan ka qeybgalin tartankii Euro2012 ee ay xulka Spain ku guuleysteen balse waxa uu ku soo laabtay tababarka iyadoo diyaargarow loogu jiro tartanka bisha August ka bilaabanaya dalka Spain.
Taqtarka kooxda Barca Ramon Cugat ayaa sheegay inuusan weli tartan rasmi ah safan karin Villa uuna weli u baahan yahay jimicsi joogta ah si uu diyaar u noqdo.
“David Villa weli kuma jiro gacanta taqaatiirta balse waxa uu ku jiraa heerkii uu dib ugaga soo kabanayay,”ayuu yiri Cugat isagoo la hadlayay shabakada warbaahinta ee Barca.
Kabtanka kooxda Barca Carles Puyol oo isaga laftiisa ka soo laabtay qalliinka jilibka loogaga sameeyey ayaa ka sheegay shir jaraa’id in aan loola carari doonin Villa garoonka inta uu si wanaagsan u soo kabanayo.
“Waxa uu u muuqdaa nin jeceyl badan u haya ciyaaraha, rajo wanaagsana leh,”ayuu Puyol sheegay. “Marka waqti dheer uu qofku dhaawac ahaado arrinta ugu muhiimsan waa inaan si degdeg ah loola cararin,”ayuu sii raaciyey.
Kooxda Barca ayaa kulamo saaxibtinimo waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Paris Saint-Germain,Manchester United iyo Dinamo Bucharest kahor inta aysan garoonkeeda kula ciyaarin kulanka ugu horeeya ee horyaalka La ligaha kooxda Real Sociedad.
Milkiilayaasha Man Utd Oo Dhaleeceyn Cusub La Kulmay Ka Dib Qorshahooda Deymaha Lagu Leeyahay Kooxda.
Milkiilayaasha kooxda Manchester United ayaa dhaleeceyn cusub la kulmay ka dib markii ay sheegeen in iibka suuqa saamiga la qorsheeyay ee kooxda in kala bar lacagta ka soo xaroota kaliya ay u isticmaali doonaan inay ku yareeyaan deymaha lagu leeyahay kooxda.
Hore ayay qoyska iska leh Man United Glazer family ay u sheegeen in guud ahaan lacagtaas saamiga suuqa ka soo galeysa inay u isticmaali doonaan inay yareeyaan deynta lagu leeyahay kooxda oo gaareysa 437 milyan ginni.
Si kastaba, iyadoo saamiga kooxda lagu sii daaynayo suuqa saamiga ee New York Stock Exchange, Glazers ayaa sheegeen inay isticmaali doonaan kala bar lacagta halkaas ka soo xaroota.
Waxaana ay taasi keentay carro cusub oo hor leh oo ka timaada taageerayaasha Manchester United, kuwasoo rajo ka qabay in la yareyn doono ugu danbeyn lacagta deymaha ee lagu leeyahay kooxda oo aad u badan.
Warkaan ayaa imaanaya maalin ka dib markii United ay xaqiijisay inay heshiis dhanka xayaysiinta ah la gashay shirkada baabuurta ee Mareykanka ee Chevrolet, kaasoo dhaqan geli doona 2014.
Inkastoo Manchester United dhaqaalaha soo gala sannadkii uu sii kordhayo hadana milkiilayaasha Mareykanka ayaa lagu eedeeyaa inaysan ka fekereynin mustaqbalka kooxda madaama aysan yareyn deymaha lagu leeyahay kooxda ka dhisan dalka Ingariiska.
Barcelona Oo Aqbashay Inay Ciyaaraan Supercopa Catalunya 26ka Bisha September.
Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay ciyaari doonto koobka Supercopa Catalunya ee ay la ciyaaraan Espanyol 26ka September.
Labada kooxood ee ka dhisan Catalan ayaa ku balansanaa inay koobkaan ciyaaraan 31ka July oo maanta ah, lakiin Blaugrana ayaa go’aansatay inaysan ciyaarsiinin kooxdeeda waa weyn, iyagoo ka baqayay dhaawacyo soo gaara ama daal soo wajaha ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Go’aankoodaas waxa uu keenay in la kansalo kulankaan, iyadoo madaxa Espanyol Joan Collet uu ku eedeeyay Barca inaysan ixtiraam u heynin kooxdiisa.
Kooxda ku guuleysatay Copa del Rey ayaa haatan xaqiijisay inay aqbashay xalkii uu keenay xiriirka kubada cagta Catalunya FCF ee ah in kulankaan la ciyaaro waqti kale.
“Barcelona waxa ay mar walba taageertaa xiriirka kubada cagta Catalunya, kubada cagta Catalunya iyo guud ahaan Sports-ka Catalan” ayay Barca ku sheegtay warbixin ay soo saartay.
“Kooxda waxa ay aqbashay go’aankii xiriirka kubada cagta Catalan ee ah in la ciyaaro Supercopa Catalunya 26ka September. Tababaraha Barcelona waxa uu kulankaas la soo shirtagi doonaa kooxdiisa ugu fiican ee macquulka ah”.
Koobka Supercopa Catalunya ee Espanyol ayaa ku soo aadaya seddex maalin ka hor inta aysan Barcelona la ciyaarin Sevilla, kulankooda afaraad ee horyaalka.